I-US Federal Holidays: Uluhlu kunye nexesha
Xa amaHholide eFredited States e-United States?
Kukho iiholide ezili-11 ezibandakanyekayo ezibandakanya uSuku lokuSungulwa xa umongameli wase-United States ufungelwa kwi-ofisi . Ezinye iholide zedolophu ezifana neKrisimesi Imini ehlonipha imicimbi eyingcwele kwezinye iicawa. Abanye bahlawula imifanekiso ebalulekileyo kwimbali yase-US njengoMartin Luther King Jr kunye nemihla ebalulekileyo kunye nokusekwa kwesizwe njengoSuku lwe- Independence .
Abasebenzi baseburhulumenteni baseburhulumenteni banikezelwa usuku, ngokuhlawula, kwieholide zedolophu.
Uninzi loorhulumente baseburhulumenteni kunye noluntu, kunye namanye amashishini abucala asebhanki, avumela abasebenzi babo ukuba bahambe nabo kwieholide. Ieholide zaseFranshi zichazwe kwi-Bill8 ye-Uniform Holidays Bill, enika abasebenzi baseburhulumenteni iintsuku ezintathu zeentsuku e-Washington, iSuku lweSikhumbuzo, uSuku lweVeterans kunye neColumbus Day. Xa iholide ephasayo iwela ngoMgqibelo, ibhiyozelwa phambi komhla; xa iholide yombuso ewela ngeCawa, ibhiyozelwa ngomhla olandelayo.
Uludwe lweeHholide zeFredari kunye neeDates
Usuku Lomnyaka Omtsha : uJanuwari 1.
Umhla wokuzalwa kaMartin Luther King Jr : NgoLwesithathu ngoMvulo ngoJanuwari.
Usuku lokuvulwa : uJanuwari 20 ngonyaka emva kokunyulwa koongameli.
Usuku lokuzalwa lukaGeorge Washington : Okwesithathu ngoMvulo ngoFebhuwari.
Usuku loSikhumbuzo : NgoMvulo odlulileyo ngoMeyi
Usuku lokuzimela : ngoJulayi 4.
Usuku lomsebenzi : NgoMvulo wokuqala ngoSeptemba.
Usuku lweColumbus : NgoMvulo wesibini ngo-Oktobha.
Usuku loMkhosi weeNkulumbuso : ngoNovemba 11.
Ukubonga : Iwesine ngoLwesine ngoNovemba.
IKrismesi : ngoDisemba 25.
Oorhulumente basekhaya kunye noorhulumente bazisa iishedyuli zabo zeeholide, njengamashishini. Abaninzi abathengisi base-US bavaliwe kwiKrismesi, kodwa abaninzi bavulelekile kwiSuku lokuBonga ukuVumela ukuba abathengi baqale ukuthenga iholide ngaphambi kokuqala kwesiqhelo sonyaka, u-Black Friday.
Imbali yamaHholide amaHhovisi
Usuku lomNyaka omtsha liholide kumazwe amaninzi.
Usuku lukaMartin Luther King, ukubhiyozela ukuzalwa kweenkokheli zamalungelo oluntu, ngowona nto yakutshanje kwieholide. Intshukumo kaMartin Luther King Day yaqala emva nje kokufa kwakhe ngo-1968. Ngowe-1983, iCongress yadlulisa iBill Day Bill. Umthetho owadala iholide yomthetho kwigama likaKumkani waqala ukusebenza ngo-1986. Usuku lwaqala ukubhiyozelwa kuwo onke ama-50 ngonyaka ka-2000.
Ngowe-1879, iCongress yazisa umhla wokuzalwa kaGeorge Washington njengeholide. Ngo-1968, iCongress yashintsha umhla wokukhumbula umhla ka-Febhuwari 22 ukuya ngoMsombuluko wesithathu ngoFebruwari.
Usuku lweSikhumbuzo, owayesaziwa ngokuba yiDemoration Day, uhlonipha imfazwe yesizwe eswelekileyo kwaye luqala isiqalo sehlobo. Kwadalwa ukukhunjulwa kwabo bafa ngexesha leMfazwe phakathi kweMerika kodwa sele bandisiwe ukuba bahlanganise ezinye iimfazwe. Ukuzalwa ngokusemthethweni kweeholide kwenzeke ngo-1886 e-Waterloo, eNew York.
Usuku lwe-Independence lugubhiwe ngomhla we-4 kaJulayi ukususela ngo-1777, kwaye likhunjulwa ukusayina kweSibhengezo soBu-Independence ngoJulayi 4, 1776.
Usuku lomSebenzi lubonisa ukuphela kokuphela kwehlobo. Kwakhona kubonisa ukubuyela esikolweni kubantwana abaninzi eMelika. Kwadalwa ukubhiyozela impumelelo yabasebenzi ngowe-1882. Ukulungiswa kwayo kwamanye amazwe nguMbhiyozo woSuku lomSebenzi ka-Meyi 1.
Usuku lukaColumbus luyabona ukuba indoda izuzwa ngokuqhelekileyo ekufumaneni iMelika. Kukho amaholide afanayo kumazwe aseLatin American naseCaribbean. Ukubhiyozelwa koSuku lweColumbus kwiNew York ngo-1792. Ukususela ngowe-1971, uSuku lweColumbus ukhunjulwa ngoMsombuluko wesibini ngo-Oktobha; Oku kukubonga kwakhona eCanada. Ukususela ngo-1966, i-Muscular Dystrophy Association iye yabamba ithelethoni yonyaka ngalolu suku.
Usuku LwabaVeter luzukisa onke amabutho ase-United States amabutho axhobileyo kwaye liholide yelizwe kuwo onke ama-50. Kwezinye iindawo emhlabeni jikelele, lo mbhiyozo ubizwa ngokuba yiSigistice Day okanye Usuku lokukhunjulwa. Eli holide libhiyozelwa ngokusemthethweni kuphela koorhulumente kunye noorhulumente karhulumente.
I-Thanksgiving ibhiyozelwa ngoLwesine wesine ngoNovemba . Imbali yayo iqala ngabahlali bokuqala baseYurophu: eVirginia ngo-1619 naseMassachusetts ngo-1621. Isimemezelo sokuqala sokuBonga iNtetho sanikezwa yiContinental Congress ngo-1777. Emva koko ngo-1789, uGeorge Washington wadala uSuku loPhuculo lokuqala olukhethwe nguRhulumente wase-US. Nangona kunjalo, bekungekho u-Abraham Lincoln wachaza usuku lukazwelonke lokubulela ngo-1863 ukuba iholide yaba yonyaka.
IKrismesi ibhiyozela ukuzalwa kukaYesu Kristu kwaye yiyo kuphela iholide yenkolo eyaziwayo.
Iingcebiso zokufumana iShefeledi yaseCalifornia
I-Astronomy 101: I-Astronomy yamanje